दलान नेपाल : मधेशी नेतृत्वले आफ्नै समुदायसँग अन्याय गरे — प्रा.डा. कृष्ण हाछेथु
० सबै आ–आफ्नो अडानमै कायम छन् त ?
— अडानले त समस्या समाधान हुँदैन नि त । यसलाई विवेकपूर्ण रूपमा त्यसको सम्भावित परिणामहरूलाई पूर्वानुमान गरेर गहन छलफल हुनुपर्छ । त्यो गहन छलफल भइरहेको छैन ।
० सबै दलहरू आफ्नो घोषणापत्रको अडानमा छन्, समस्या समाधानतिर गएका छैनन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
— नेपालको यो दोस्रो संविधानसभा नै होला जहाँ घोषणापत्रलाई अवमूल्यन हुने खालको निर्वाचन परिचालन भएको छ । घोषणापत्र कागजमा मात्र सीमित राख्यो । घोषणापत्रलाई जनतामा लगिएन । मूलतः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सबै पार्टीहरूले मतदातालाई उम्मेदवारले व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट गर्ने क्रममा मतदाताले न संघीयतासम्बन्धि प्रश्न सोधेको हो न त व्याख्या गर्ने समय हुन्छ । यो संविधानसभाको विशिष्ट चुनाव हुने खालको प्रचार शैली त्यसरी भएन । त्यसैको परिणामअनुसार संसदीय चुनाव जस्तो भयो । नेपाली जनताहरू पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जुन उत्सुकता र उत्साह थियो, के हुँदैछ भन्ने आश थियो त्यो देखिरहेको छैन ।
० तपाइँ राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगआयोगको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो आयोगको प्रतिवेदनलाई अहिलेको संविधानसभाले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्छ भन्नेमा तपाइँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
— राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोग जब गठन भयो त्यो संघीयताको मामिलामा दुई चरमपन्थीहरू थिए । एउटा, चरमपन्थी विचार भनेको जातीय संघीयता बनाउनुपर्छ, जातिको राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र उपभोगमा पनि रैथानेहरूको हुनुपर्छ । आत्मनिर्णयको अधिकार पनि रैथानेहरूको नै हुनुपर्छ भन्ने थियो । अर्को चरमपन्थीले अहिलेको पाँच विकास क्षेत्रलाई यथास्थानमा नै राख्नुपर्छ । त्यसमा हल्काफुल्का परिवर्तन गरेर यथास्थिति खालकै अहिलेको एकात्मक संरचनालाई आवरणमा मात्र संघीयतामा लानुपर्छ भन्ने विचार थियो । तर, यी दुईटा विचारहरूको बीचमा बसेर राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगले मध्यमार्ग खोजेको थियो । जातीय संघीयता पनि नेपाललाई उपयुक्त हुँदैन, अहिलेको यथास्थितिको एकात्मक चरित्रलाई आवरण मात्र संघीयता दियो भने पनि ठिक छैन । भनेपछि नेपालको निमित्त त्यो संघीयता उपयुक्त हुन सक्छ, जहाँ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भएकोले सबै थरि जाति, भाषा, संस्कृतिको प्रतिविम्ब हुने खालको प्रदेशहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो मात्र समावेशी हुन्छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक शक्तिको कुरा गर्ने हो भने १२औं शताब्दीदेखि निरन्तररूपमा पहाडी ब्राह्मण क्षेत्री समाजिक रूपमा पनि उच्च जाति, आर्थिकरूपमा पनि हुने खाने र राजनीतिक रूपमा पनि वर्चस्व भएको । अरू जनजाति, मधेशीहरूको राजनीतिमा पनि पहुँच कम छ, सामािजक रूपमा पनि राष्ट्रव्यापीरूपमा पनि तल्लो तहमा राखिएको छ, गरिबी पनि त्यहीं बढी छ । भोली बन्ने संघीय संरचनाले गरीब, बहिष्कृतहरूलाई खुला गर्न सकिएन भने उनीहरूको हित अनुकूलको संघीयता बन्न सकेन भने नेपाल किन संघीय राज्यमा जानुप¥यो भन्ने कुराको उत्तर नै पाउँदैन । तसर्थ वैचारिकरूपमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले मध्यमार्ग खोजेको थियो । १४ प्रदेश बढी भयो र ६ प्रदेश कम भयो भने बीचको १० प्रदेशको कुरा राखेका थियौं । नामको बारेमा विवाद आउँछ । अर्को कुरा प्रदेशहरूको सीमांकन कसरी गर्ने भनेर । त्यसको दुईटा बाटो छ । प्रदेशको सीमांकन निश्चित बसोबासको निरन्तर गर्ने हो भने त्यो भैगोलिक संघीयता भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासले के भन्छ भने मिश्रित बसोबासको राजनीतिक परिणाम । अहिले मिश्रित बसोबासलाई नै बढावा दिएर अगाडि बढ्ने हो भने भोली सिंगो नेपालको राजनीतिमा सामाजिक समूहहरूको असन्तुलित शक्ति सन्तुलन छ त्यो निरन्तर हुने भयो ।
० कस्तो हुनुप¥यो त ?
— प्रदेशहरू बनाउँदा जुन संविधानसभामा त्योबेलाको राज्यको पुनर्संरचना समितिमा सर्वसम्मतबाट के निर्णय गरेको थियो भने प्रदेशको सिमाना कोर्दा त्यो समुदायको बसोबासको निरन्तरतालाई आधार मानेर सीमांकन गर्ने । त्यसरी गर्दा अहिलेका जिल्लाको सिमाना हेरफेर हुन्छ । लक्षित वर्गहरूको उपस्थिति बहुसंख्यक त सम्भावित कम ठाउँमा मात्र छ । जति सकिन्छ भूगोलले साथ दिएसम्म लिम्बूहरू एउटै प्रदेशमा परोस्, मगरहरू एउटै प्रदेशमा परोस्, तामाङहरू एउटै प्रदेशमा परोस् । त्यसरी गर्दा भोलीको राजनीतिमा लिम्बू, राई, तामाङहरूको मुख्यमन्त्री सम्भावना पनि हुन्छ । त्यो सम्भावनालाई बढाउने भनेको त्यहाँ नेवार, बाहुनले मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भनेको होइन । लिम्बूवान भनेर कुनै प्रदेशको नाम राख्दा राख्दै त्यहाँ कुनै अपवादमा कुनै नेवार वा बाहुन नेता पनि त मुख्यमन्त्री हुन सक्छन् । तसर्थ, त्यो पदमा कुनै पनि जातिलाई प्रतिबन्ध नराखिकन खुला राख्ने हो । जहाँ हिजो राजनीतिक शक्तिमा कम मात्र पहुँच भएका मान्छेहरूलाई सजिलो होस् । त्यसरी सीमांकन गर्नुपर्छ । राज्य पुनर्संरचना आयोगले जुन परिस्थितिमा सुझाव दियो यो मध्यमार्गभन्दा अरू राम्रो देखिएको छैन ।
० अहिलेको संविधानसभामा भएका ठूला दलहरूले उत्तर–दक्षिण भनिरहेका छन् नि ?
— नेपाल किन संघीय राज्यमा जानुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यो एउटा दृष्टिकोण हो । अर्को दृष्टिकोणबाट राजनीतिक शक्ति सन्तुलनले के भन्छ भने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र एमाले विजय भएर आयो । यी दुईटाको जति सिट छ त्यसलाई सँगै राख्दा त्यो दुई तिहाईमा अलि मात्र पुग्दैन । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कोणबाट हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमाले जो भौगोलिक संघीयताको पक्षधर छन् उनीहरूको पल्ला भारी छ । राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा कसको पल्ला भारी छ भनेर हेर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेले यदि चाहेको खण्डमा उनीहरूले खोजेको जस्तो प्रदेश बन्न सक्छ । प्रश्न के उठ्छ भने त्यसरी बन्न जाने प्रदेश मधेशी समुदायलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, लिम्बूलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन, राईलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदेन । त्यो कुरा प्रश्नवाचक छ । किनभने हिजोको निर्वाचनमा लिम्बूवान प्रदेशप्रति लगाव हुँदाहुँदै उसले कांग्रेसलाई भोट हालेको हुन सक्छ । मधेश शब्दप्रति अत्यन्त आकर्षित भएका मान्छेले पनि मधेशी नेता मन नपरेर एमालेलाई पनि भोट हालेको हुनुपर्छ । तसर्थ, जनताको मनोविज्ञानलाई जुन राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूलको व्याख्या गरेर जनतालाई हर्ट ग¥यो भने त्यस्तो संविधान संविधानसभाबाट बने पनि टिकाउ हुँदैन । हाम्रो संविधान राम्रो संविधान मात्र टिकाउ हुन्छ । तर्कपूर्ण, विवेकपूर्ण संघीय खाका कोर्ने कि अहिलेको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन अनुरूपको कोर्ने भन्ने प्रश्न छ ।
० तपाइँहरूले बुझाउनु भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने सम्भावना कतिको छ ?
— निर्णय गर्ने टेबुल बस्ने मान्छेले त्यो प्रतिवेदन पढ्यो भने सम्भावना बढी छ । तर, यिनीहरूले पढेकै छैन । रिपोर्टलाई अखबारहरूले जसरी विकृत गरेर प्रस्तुत गरेका छन् त्यो पढेर धेरैले आफ्नो अवधारणा बनाएका छन् । आयोगको रिपोर्ट न कांग्रेसले भनेजस्तो छ, न माओवादीले भनेजस्तो छ, न माओवादीले भनेजस्तो र न मधेशवादी दलले भनेजस्तो छ । त्यो विचार, मन्थन र छलफलबाट आएको उत्पादन हो । मैले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आयोगको रिपोर्ट पढ्नु भएको छ सोध्दा छैन भन्छन् । अनि आयोगको रिपोर्ट ठिक बेठिक कसरी भयो भनेर सोध्दा अखबारबाट थाहा भयो भनेर भन्छन् । अखबारले त बङ्ग्याएकै थियो नि त ।
० यसपटकको निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरू पराजित भइसकेपछि तिनीहरूले उठाउँदै आएको मधेश प्रदेश र संघीयताको मुद्दा कमजोर भएकै हो त ?
— मधेशी जनताको एजेन्डा एउटा हो । यहाँ मधेशकेन्द्रित दलहरू धेरै सिट जितेपनि कम सिट जिते पनि एजेन्डा सधैं रहिरहन्छ । निश्चित रूपमा पहिलो संविधानसभामा मधेशी दलहरूले मधेशी जनतामाथि न्याय गर्न सकेनन् । त्यसकारण मधेशी जनताहरू आक्रोशित भए । लोकतन्त्रको सिद्धान्त नै हो कि जनतालाई सेवा ग¥यो भने निरन्तर रहन्छ होइन भने फालिन्छ । न मधेश मर्छ, मधेशी मर्छ र न मधेशका मुद्दा मर्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई उपयुक्त रूपमा उठान गर्न सकेन भने भोली अर्को नेता आउँछन् ।
Unknown November 28, 2014 at 2:06 PM